KSL Company – Just another My Website site
” ပြီးပြည့်စုံသော ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ခွန်အားအစစ်အမှန်ကို ထာဝရပေးစွမ်းနိုင်မည့် Biomanix plus”
♥️ရောင်းအား အ ကောင်းဆုံး အမျိုးသားအားတိုးဆေး Biomanix Plus♥️
BIOMANIX PLUSအမျိုးသားအားဆေးသည်သဘာဝherbal ဆေးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီး လွန်စွာတန်ဖိုးကြီးသောဆေးအမျိုးအစားများစွာပါဝင်သော multi vitaminအမျိုးသားဟိုမုန်းတိုး အိမ်ထောင်ရေးသုခအားဆေးဖြစ်ပါသည်။ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများရလဒ်ဟာ ယခင်သုံးစွဲခဲ့ဖူးသောအားဆေးများစွာထက် သာလွန်ကောင်းမွန်နေပါတယ်။
✔️ပန်းသေ ပန်းညိုးရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေပြီး
အပြင်သွေးတိုး နှင့် ဆီးချိုသမားများအတွက်…………သုံးစွဲရန် အလွန်အဆင်ပြေစေတဲ့အတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲရသော ဆေးတန်ဖိုးသည်ကျန်းမာရေးရှု့ထောင်ကကြည့်လျှင် များပြားသည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ premium product ဖြစ်ပြီးဓါတုဆေးလုံးဝကင်းစင်သောHerbal supplementစစ်စစ် ဖြစ်ပါသည်။ဆေးတောင့် capsules (60) ပါဝင်ပြီးတနေ့လျှင် သုံးစွဲသူ၏ ဟိုမုန်းနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် မူတည်၍တစ်လုံးမှ သုံးလုံးအထိ အစားနှင့်ဝေးဝေးရေများများဖြင့်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ နာမည်ကျော်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ABHဆေးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့အထူးထုတ် အမျိုးသားအားတိုးဆေး Biomanix Plusကို မန်မာနိုင်ငံကို တရားဝင် တင်သွင်းရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ့ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးfda ခွင့်ပြုမိန့် (2019-B-1/1221)ဖြင့်စိစစ်မှတ်ပုံတင်ထားသောတရားဝင် product ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးတဘူးလျှင်-125000 (တစ်သိန်းနှစ်သောင်းငါးထောင်)ဖစ်ပြီး- မြန်မာတပြည်လုံးကိုရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။
✅ Sexovit Forte (UK) ✅
ဆရာဝန်များ၏ လမ်းညွှန်မှု အများဆုံးတရားဝင်ဆေး Sexovit Forte (UK) ဆိုတာ သားသမီးရတနာထွန်းကားဖို့ အမျိုးသား မျိုးရည်ကို တိုးပွားအားပြည့်စေသော ဆေးဖြစ်ပါတယ်။(နောက်ဆုံးမှာ Sexovit Forte (UK) တစ်လုံးမှာပါဝင်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်)အသက် ၃၀ကျော်လာတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ Testosterone Level ဟာ၂၅ရာခိုင်နှုန်းကနေ စတင်လျော့နည်းလာပါပြီ..။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အသက်အရွယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းရလာတာနဲ့အမျှ Testosterone Level တွေပိုကျလာကာ လိင်စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တွေကျဆင်းလာခြင်း ပန်းသေပန်းညိုးဖြစ်လာခြင်းတွေကို ကြုံတွေ့လာရတတ်ပါတယ်.
HealthAid(UK) ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Sexovit Forte ကိုနေ့စဉ် ပုံမှန်သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ Testosterone Level ကျဆင်းလာခြင်း ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်အပြင် မျိုးပွားအင်္ဂါကိုကျန်းမာစေကာ ပန်းသေ ပန်းညိုးရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သာလွန်တဲ့လိင်စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်…။
Sexovit Forte ကို နေ့စဉ် ပုံမှန်သုံးစွဲပါကသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီး အမျိုးသားသုတ်ပိုးလုပ်ဆောင်ချက်ကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ ဆေးပါ။နေ့စဉ်သောက်သုံးနိုင်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့အပြင်ဆီးချိုသွေးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါ သမားများ အိမ်ထောင်ရေးသုခ ပြည့်စုံရန်အတွက်ပါသောက်ရန် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ကလေးလိုချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်များလည်း ကလေးရစေရန် များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။
Made in EnglandFDA Approved ဖြစ်တာကြောင့်!!!အထူးစိတ်ချရတဲ့ အာမခံချက် အပြည့်ရှိတဲ့ဆေးဖြစ်လို့ စိတ်ချစွာသောက်နိုင်ပါတယ်!!!
Sexovit Forte (UK) တစ်လုံးမှာပါဝင်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်။
Each HealthAid Sexovit Tablet contains (average): %NRV
Natural Vitamin E (100iu) 67mg
Korean Ginseng Extract**(15:1) (**standardised to 25% ginsenosides) [equivalent to 900mg Korean Ginseng Powder] 60mg
Ginkgo Biloba Extract**
(**standardised to 24% glycosides & 6% terpenoids) 50mg
Yangon sale office- အမှတ် (27) ပထမထပ်
သံသုမာလမ်းမကြီး – လိုင်စင်ရုံးမှတ်တိုင်အနီး KSL (king solomon land) company တွင်လည်းကောင်း
Mdy sale office- အမှတ်(443) ၈၆လမ်းပေါ် ၄၆ -၄၇ကြား
ဘုရားအနောက်မုဒ် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တွင်လည်းကောင်း လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
“ဆရာဝန်များ လျို့ဝှက်ထားသောယောကျာ်းအားတိုး ဆေးစွမ်းကောင်းများ”
ဂျန်းတဲမန်း 3(gentalman) ဆေးတောင့်မှာ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ သဘာဝပစ္စည်းများမှ စစ်ထုတ်ယူထားပြီး အဖိုးတန်လှတဲ့ သစ်မြစ်သစ်ဖု ၃-မျိုးဖြစ်တဲ့
🔸မူရာပူမာ (Muira Puama)
🔸တောင်ထန်းပင် (Saw Plametto)နဲ့
🔸ကိုရီယားဂျင်စင်း (Korean Ginseng) တို့အပြင်
🔸ဖရုံစေ့အဆီ (Pumpkin Seed Oil) နဲ့ ဇင့်တို့
ပါဝင်တဲ့အတွက် အမျိုးသား စွမ်းဆောင်ရည်ရော သက်လုံပါကောင်းလာမှာ အသေအချာပါပဲ။
အမျိုးသားများအတွက် အထူးဖော်မျုလာနဲ့ ထုတ်လုပ်လို့သဘာဝအတိုင်း ကျားဟော်မုန်းကို ခန္ဓာကိုယ်က ထုတ်လုပ်စေမယ့် ပေါင်းစပ်မှု တစ်ခုပါ။ ဂျန်းတဲမန်း (3)ကို ဒီလိုအမျိုးသားတွေ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
၁. အသက် ၃၀ ကျော်လာပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားချင်တဲ့သူတွေ
၂. သွေးချိုဆီးချိုလို ရောဂါရှိသူ/ ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်းကို ကာကွယ်လိုတဲ့သူတွေ (အိမ်ထောင်ရေးသုခအတွက်)
၃. လုပ်ငန်းခွင် စိတ်ဖိစီးလို့ အိမ်ထောင်မှုသုခမှာပါ ထိခိုက်နေတဲ့သူတွေ
၄. သွေးတွင်းအဆီကျဆေး (statins နဲ့ဆုံးသောဆေးများ) သောက်နေရလို့ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာတဲ့သူတွေ
၅. မိမိရဲ့ အမျိုးသားစွမ်းဆောင်ရည်ကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေသူတွေအတွက် အလွန်သင့်တော်ပါတယ်။
သောက်သုံးပုံ : နံနက်အိမ်ရာထချိန် အစာမစားမီ မိနစ်-၂၀ခန့်အလိုတွင် တရက်၁လုံး သောက်ပေးရမည်။
ဒီဆေးက အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ပြီး တကမ္ဘာလုံးမှာ တရားဝင်ရောင်းချနေသော တရားဝင်ဆေးဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆေးဝါးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး FDAခွင့်ပြုချက်လည်းရထားပြီး ဆေးရုံ ဆေးခန်းများတွင် ဝယ်ယူနိုင်သလို ဖြန့်ချီရေး KSL ကုမ္ပဏီရုံးခွဲများတွင်လည်း လာရောက် လေ့လာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ရုံးခွဲ – အမှတ် (27) သံသုမာလမ်းမကြီး ပထမထပ် (A) မြင်သာလိုင်စင်ရုံးရှေ့ – ကညနလိုင်စင်ရုံးမှတ်တိုင်အနီး
မန္တလေးရုံး – အမှတ် (443) ၈၆ လမ်းပေါ် ၄၆-၄၇ကြား ဘုရားကြီးအနောက်မုဒ် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်
ဈေးနုန်း- 37000 ( သုံးသောင်း ခုနှစ်ထောင်ကျပ်)
ဆေးတောင့် 30cap ( တနေ့တလုံး one day one pill)
မြန်မာတပြည်လုံး အိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ဖုန်းဆက်(09266265552-09266265553)မှာယူရုံဖြင့် ရန်ကုန်-မန္တလေး နေ့ချင်းအရောက်ပို့ပေးနေပါပြီ။ ပို့ဆောင်ခ – 2000-3000 ကျသင့်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် QVITA (ကျူဗိုက်တာ)ကို သောက်သုံးသင့်ပါသလည်း။
🔹ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါရှိသောသူများ၊
🔹အသီးအရွက်များကို လုံလောက်အောင် မစားသူများ၊
🔵အသား၊ငါး လုံလောက်အောင် စားသောက်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓါတ်များကို ပြည့်ဝစွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ Qvita multivitamin ကို တနေ့တလုံး သုံးစွဲပေးပါ။
🔵နေ့စဉ် အစားအသောက် စုံလင်အောင်စားသော်လည်း ဗီတာမင်စုံလင်အောင် ပါဝင်မှု လုံလောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့် လိုအပ်သော ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးရန် Qvita multivitaminကိုနေ့စဉ်သောက်သုံးပေးသင့်သည်။
🔵Qvita (ကျူဗိုက်တာ)တွင် Vit C, B1, B2, B6, B12, Biotin, Vit A, D3, Vit E, B K1, Potassium, Iodide ,Selenium , Zinc ,Calcium , Manganese , Lutein တို့စုံလင်စွာ ပါဝင်ပါသည်။
🔵ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူး Qvita Multivitamin ကိုတနေ့တလုံး ပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုများကို လျှော့ချပေးခြင်း ၊စိတ်ကျရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပြီး တနေ့တာကုန်ဆုံးသွားသော စွမ်းအင်များကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင် ခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားမြင့်မားအောင် အထောက်အပံ့ပေးထားသောကြောင့် ဖျားနာခြင်းပင် မဖြစ်စေခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။
🔵ကနေဒါနိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်နည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ(FDA)လက်မှတ် ရထားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် သောက်သုံး အားဖြည့်နိုင်ပါသည်။
တနေ့လျှင် ဆေး(၁) လုံး အစားစားပြီးတိုင်း သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့်လည်း လိုအပ်သလို သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
“ဒီလိုရောဂါ လက္ခဏာတွေပြနေပြီဆို အပြေးလာခဲ့ပါ”
(made in england) -26500
😱 မကြာခဏ ရေငတ်ခြင်း ။
😱 မကြာခဏ ဆာလောင်ခြင်း ။
😱 မကြာခဏ ဆီးသွားခြင်း ။
😱 မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ။
😱 အမြင်အာရုံမှုန်ဝါးခြင်း ။
😱 ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျခြင်း ။
😱 ပန်းသေ ပန်းညိုး ဖြစ်ခြင်း ။
ဒီလက္ခဏာတွေ သင်ကြုံနေရပြီဆိုရင်တော့ ဆီးချိုရောဂါကို သတိပြုဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ..။
* တလစာ (26500) ကျပ်သာ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး *
ဆေးတဘူးသောက်ပြီးချိန်မှာ သိသာထူးခြားကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ကြောင်း ရဲရဲကြီး အာမခံပေးထားလို့ ………ကျတော်တို့ KSL company ရုံးမှာ လာရောက်လေ့လာပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
အမှတ်-27(ပထမထပ်) သံသုမာလမ်းမကြီး ကညနလိုင်စင်ရုံးရှေ့ လိုင်စင်ရုံးမှတ်တိုင်အနီး ……
“SiberSlim” “ဝလွန်းတဲ့သူ” အဆီများနေသူနဲ့
မရှိမဖြစ် သုံးစွဲသင့်တဲ့ အဆီကျ ပိန်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။💪💪
(အမျိုးသား &အမျိုးသမီးပါသုံးနိုင်ပြီး အစွမ်းပြလျှင်မြန်ပါတယ်)
SiberSlim Tabletsကို ကျန်းမာတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်စေရန် လိုအပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကာ
စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ပေးသော ဂျင်စင်းပါဝင်ပြီး။
အစာစားချင်စိတ်ကို လျော့နည်းစေဖို့ သဘာဝ
Apple Cider Vinegarလဲ ပါဝင်ပါတယ်။
Ginger, Guarana & Green Tea Extractတွေကတော့ ခန္ဓာကိုယ်က ပိုလျှံနေတဲ့ အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေမှာပါ။
Hydroxycitric Acidက အဆီပိုတွေ ခန္ဓာကိုယ်မှာ
သိုလှောင်မှုကို တားဆီးပေးပြီး အစာစားချင်စိတ်ကို
သွေးချို ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူများအတွက်
သွေးတွင်း ဂလူးကိုစ်ဓါတ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ကူညီတဲ့ Chromiumလည်း ပါဝင်ပြီး သောက်နေရတဲ့ ဆီးချိုဆေးတွေနဲ့
ဆေးအချင်းချင်း ဓါတ်ပြုမှု (Drug Interaction)လဲ မရှိလို့ (SiberSlimမှာ ဆေးမဟုတ်ပဲ သဘာဝပစ္စည်းများမှ
လိုသည့်အပိုင်းကိုသာ စစ်ထုတ်ထားသော Nutraceutical
ဖြစ်သည့်အတွက်) သွေးချိုရောဂါရှင်များ ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာရရှိစေဖို့ အလွန်သင့်တော်ပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် အဆီပိုမရှိပဲ ကျန်းမာသော ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့
ကူညီမယ့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်များလည်း (Amino Acids)
ပါဝင်ပါတယ်။ သွေးချိုဆီးချို ဝေဒနာရှင်များ လန်းဆန်းစွာနဲ့
ရရှိအောင် SiberSlimက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
သောက်သုံးပုံ : အသက် ၁၆-နှစ် ပြည့်ပြီးသူတိုင်း
အစာမစားခင် နာရီဝက်ခန့်ကြိုပြီး နှစ်လုံးသုံးစွဲရမည်။
Price- 30000 (သုံးသောင်းကျပ်)
🙏 ” ဒူးနာ ခါးနာ အမြန်ဆုံး သက်သာစေရမည် “🙏
ဒူးနာ ၊ ခါးနာ ၊အဆစ်၊အမြစ်တွေ ရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်းကြောင့်
အထိုင်အထ အတက်အဆင်း အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ KSLရဲ့
ချစ်မိတ်ဆွေများ ဘယ်နှစ်ယောက်တောင် ရှိနေပြီလည်း?👈
ဆေးကောင်းလေးကို KSLရုံးမှာ လာရောက်
👉အရိုးအကြော ဆရာဝန်များရဲ့ အထူးအားပေးထောက်ခံမှုနဲ့
🔹 အရိုးနု (cartilage)
🔹 အရည် (joint fluid)
ထားလို့ ထိုအရာတို့ကို အားဖြည့်ထောက်ပံ့နေသော ဓါတ်သည် Glucosamine Sulphateဖြစ်သည်။ထိုGS လျော့နည်းပျက်စီးသည့်အခါ နာကျင်ခြင်းရောင်ရမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ထိုသို့ပျက်စီး နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေရန် Glucosamine Sulphateကိုအစားထိုးပြန်လည်
🔸G-S သည် ပျက်စီးသွားသော အရိုး အဆစ် များကို
🔸G-Sသည် လေးဘက်နာ၊ အရိုးပွ ၊ အရိုးရောင်၊ အဆစ်မြစ်ရောင် ရောဂါ နှင့် အကြောတက် ၊ ကျီးပေါင်း ရောဂါ များကိုလည်း
အသက်အရွယ် ကြီးရင့် သူများ၊ ဒူး နာ ၊ ခါးနာ၊ အရိုး အဆစ်နာသူများ အတွက် ပို၍ သင့်လျှော် ပါသည်။
➡️ယခုရောင်းချပေးသော GS -1000mg ဆေးသည်
ဆရာဝန်များ၏ထောက်ခံချက်ရထားပြီးMyanmar fdaရပြီးသောUKမိတ် (100%)ဒူးနာ ခါးနာပျောက်ဆေးဖြစ်လို့
စိတ်ချယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ 💪
ဆေးတဘူးမှာ ဆေးတောင့်(30)ပါပြီး တဘူးလျှင် (၂၂၀၀၀)
♥️ 22000- ‘kyats♥️
address- အမှတ် (၂၇)ပထမထပ် ၊သင်္ကန်းကျွန်း
ksl company limited
No.121, (5)th Floor B, Hlaw Kar Road, (21) Ward, South Dagon Township, Yangon.
(1) No.16, 3rd (B) Floor, Natchaung Street, Tamwe Township, Yangon.
(2) No.27, First Floor, Thanthumar Road, Ngamoeyate Quater, Thingangyun Township, Yangon.